Galmudug oo ciidan geysay duleedka Dhuusamareeb - Caasimada Online
Home Warar Galmudug oo ciidan geysay duleedka Dhuusamareeb
Galmudug oo ciidan geysay duleedka Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Ciidamada Xoogga dalka qeybta 21-aad iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu soo warramayaa in saacadihii la soo dhaafay lagu daadiyey duleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay dhaq-dhaqaaqy culus ka bilaabeen deegaanada hoos yimaadaan magaaladaas oo ay shir ku leeyihiin madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kuwa dowlad goboleedyada dalka iyo Duqa magaalada Muqdisho.
Ujeedka ah sidii ay ciidamadaasi uga hortegi lahaayeen weerarada hoobiyeyaasha ee ay dagaalamayaasha Al-Shabaab kasoo abaabulaan halkaasi.
Sidoo kale ciidamada ayaa howl-gallo ballaaran ka wada xaafadaha qaar ee magaalada Dhuusamareeb, kuwaas oo lagu sugayo amniga guud ee degmadaasi.
Dhuusamareeb ayaa waxaa maanta ka furmayashirka wada-tashiga dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaas oo diirada lagu saarayo doorashada.
Si kastaba habeen hore ayey aheyd markii weerar loo adeegsaday hoobiyeyaal Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.